Dhaq dhaqaaqyada Ganacsi iyo goobihii waxbarashada Dhusamareeb oo Dib u furmay. – SBC
Dhaq dhaqaaqyada Ganacsi iyo goobihii waxbarashada Dhusamareeb oo Dib u furmay.
Dhuusamareeb- Goobaha Ganacsi kuwa Waxbarashada iyo suuqyada degmada Dhuusamareeb ayaa dib u furmay ka dib xiisado dagaal oo maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa gudaha degmadaas kuwaas oo u dhexeeyay xarakada Alshabaab iyo Culimaa udiinka Ahlusuna waljameeca .
Waxaa saka siweyn loo dareemayay iyagoo ay dib ugu noqonayaan ardayda goobahoodii waxbarasho oo albaabada loo furay, inkastoo ay jiraan weli goobo waxbarasho oo ku yaala magaaladaas oo weli aan albaabada loo furin .
Sidoo kale waxaa dib u furmay goobihii ganacsi ee Dhuusamareeb iyadoo ay saaka si toos ah u bilaabeen dadweynaha in ay u dareeraan goobihii ganacsi dadka iyagu ganacsanaha halka kuwa iibsanayana ay u adeegtagayeen suuqyada.
In kastoo aan la isku haleyn Karin xaaladaha degenaansho ee ka jira gobolkaas ayaa hadana waxaa soobaxaya warar hoose oo sheegaya in ay markale dagaalo dhici karaan, waxaana muuqaneysa digtoonaan ay bulshada ka qabaan dagaalo markale dhaca maadaama labada dhinac ee is hayaa ay is horfadhiyaan.
Si kastaba ha ahaatee waxaa jira dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan labada dhinac ee gobolka Galagduud isku haya waa Ahlusuna Waljameeca iyo Xaakada Alshabaab, waxaaba dhaq dhaqaaqa badigood ay ka jiraan deegaanada Guriceel iyo Dhuusamareeb.
SBC International Dhuusamareeb .